Ukuphepha Kwewebhu Kukuthinta Kanjani I-SEO | Martech Zone
Ubuwazi ukuthi cishe abasebenzisi abangama-93% baqala isipiliyoni sabo sokusesha iwebhu ngokuthayipha umbuzo wabo kwinjini yokusesha? Lesi sibalo esinqumayo akufanele sikumangaze.
Njengabasebenzisi be-intanethi, sesijwayele ukuba lula kokuthola lokho esikudingayo ngemizuzwana ngeGoogle. Noma ngabe sifuna isitolo se-pizza esivulekile esiseduze, okokufundisa ukuthi ungaluka kanjani, noma indawo engcono yokuthenga amagama wesizinda, silindele ukuthokozisa okusheshayo nezimpendulo zekhwalithi ezanelisa inhloso yethu yokusesha.
Inani le-organic traffic libeke ukugxila kwezinjini zokusesha, njengoba kuyitshe legumbi lokwakha ukubonakala okungcono kwe-inthanethi. I-Google manje ingenisa ngaphezulu 3.5 billion ukuseshwa ngosuku futhi abasebenzisi babona i-SERP yayo (ikhasi lemiphumela yenjini yokusesha) njengesibonakaliso esithembekile sokubaluleka kwamawebhusayithi.
Uma kukhulunywa ngemikhuba esebenzayo ye-SEO, sonke sijwayele okuyisisekelo. Kunconywa ukusetshenziswa kwe-savvy nokusetshenziswa kwamagama asemqoka, kanye nokwenza ngcono amathegi we-ALT, okuza nezincazelo ezifanele ze-meta, nokugxila ekukhiqizeni okuqukethwe koqobo, okuwusizo, nokubalulekile. Ukwakhiwa kwezixhumanisi nokuhola izixhumanisi nakho kuyingxenye yephazili, kanye nokuhlukanisa imithombo yethrafikhi nokusebenzisa isu elihle lokusabalalisa okuqukethwe.
Kepha kuthiwani ngokuphepha kwewebhu? Iyithonya kanjani imizamo yakho ye-SEO? I-Google imayelana nokwenza i-intanethi indawo ephephile nejabulisayo, ngakho-ke kungadingeka ukuthi uqinise ukuphepha kwakho kwewebhu.
I-SSL ayisiyona i-Security Plus, kepha iyisidingo
I-Google ihlale ivikela iwebhusayithi evikelekile futhi iphakamisa amawebhusayithi kufanele ahambele ku-HTTPS ngokuthola isitifiketi se-SSL. Isizathu esiyinhloko silula: idatha ibethelwa ngokuhamba, ivimbela noma yikuphi ukusetshenziswa kabi kobumfihlo nolwazi olubucayi.
Izingxoxo ze-HTTP ne-HTTPS kumongo we-SEO ziqhume ngo-2014 lapho i-Google imemezele amawebhusayithi aphephile ukuthi angathola ukukhushulwa okuncane kwezinga. Ngonyaka olandelayo, kwacaca ukuthi lesi siginali yesilinganiso sithwala isisindo esithe xaxa. Ngaleso sikhathi, iGoogle ibike ukuthi ukuba nesitifiketi se-SSL kunganikeza amasayithi ithuba lokuncintisana futhi kusebenze njenge-tiebreaker phakathi kwamawebhusayithi amabili, angaphansi noma aphansi, anekhwalithi efanayo.
Ukusebenzisana okukhulu isifundo esenziwe nguBrian Dean, Semrush, Ahrefs, MarketMuse, SimilarWeb, kanye neClickStream, bahlaziye imiphumela yokusesha ye-1 million ye-Google futhi babona ukuhlangana okuqinile phakathi kwamasayithi we-HTTPS namazinga wekhasi lokuqala. Akunakusho ukuthi, lokhu akusho ukuthi ukuthola isitifiketi se-SSL kukunikeza isikhundla esisezingeni elingcono, futhi akusona isibonakaliso sokubeka esibaluleke kunazo zonke i-algorithm ethembele kuyo.
I-Google futhi ishicilele ifayela le- uhlelo olunezigaba ezintathu maqondana newebhu esebenza kahle nephephile futhi umemezele ukukhishwa kwesibuyekezo se-Chrome 68 ngoJulayi 2018, esizomaka konke Amawebhusayithi we-HTTP njengoba engavikelekile ngaphakathi kwesiphequluli sewebhu esithandwa kakhulu. Kuyisinyathelo esinesibindi, kodwa esinengqondo, esizoqinisekisa ithrafikhi evikelekile kuwebhu ebanzi yomhlaba, yabo bonke abasebenzisi, ngaphandle kwalokho.
Amawebhusayithi we-HTTPS kulindeleke ukuthi abe okuzenzakalelayo, kepha ama-webmasters amaningi asadidekile ngakho Ungasithola kanjani isitifiketi se-SSL futhi kungani lokhu kubaluleke kangaka.ezizinzuzo ezimbalwa ezingenakuphikwa, zombili zisebenzisa i-SEO futhi ziphethe isithombe somkhiqizo esihle:
Ukukhuliswa kwezinga lewebhusayithi ye-HTTPS kulindeleke
Izinga elilungile lokuphepha nobumfihlo liyatholakala
Amawebhusayithi ngokuvamile alayisha ngokushesha
Iwebhusayithi yakho yebhizinisi inokwethenjelwa okwengeziwe futhi yakha ukwethenjwa (ngokusho kwe- Ucwaningo lwe-HubSpot, Abangama-82% abaphendulile bathe bazoshiya isiza esingavikelekile)
Yonke imininingwane ebucayi (isb. Imininingwane yekhadi lesikweletu) ivikelwe ngokuphepha
Ngokufushane nje, nge-HTTPS, ubuqiniso, ubuqotho bedatha, nokugcinwa kwemfihlo kuyalondolozwa. Uma iwebhusayithi yakho iyi-HTTPS, yenza isizathu esanele sokuthi iGoogle ikuklomelise njengomuntu onikela ekuphepheni kwewebhu jikelele.
Izitifiketi ze-SSL zingathengwa, kepha kukhona nezinhlelo zewebhu evikelekile yobumfihlo enikezela ngemfihlo i-cryptography yanamuhla mahhala, Masibhale. Mane ukhumbule ukuthi izitifiketi ezinikezwe yile nhlangano yegunya lesitifiketi zihlala izinsuku ezingama-90 bese kufanele zivuselelwe. Kukhona inketho yokuzenzakalela yokuvuselelwa, okuyi-plus.
Gwema Ukuba Yisisulu Samacala Okusebenzisa I-Internet
Ama-cybercrimes aguqukile: asephendukile kakhulu, aba yinkimbinkimbi, futhi kunzima ukuwathola, okungalimaza ibhizinisi lakho emazingeni amaningi. Ezimweni ezinzima kakhulu, izinkampani ziphoqeleka ukuthi zimise okwesikhashana imisebenzi yazo yebhizinisi kuze kulungiswe amaphutha ezokuphepha kuwebhusayithi, angaholela ekulahlekelweni kwemali engenayo, kwehliswe amazinga, ngisho nezinhlawulo zeGoogle.
Njengokungathi ukuhlaselwa ngabaduni akuyona ingcindezi eyanele.
Manje, ake sixoxe ngemikhonyovu ejwayelekile kakhulu nokuhlaselwa kubaduni nendlela abangayilimaza ngayo imizamo yakho ye-SEO.
● Ukuchazwa Kwamawebhusayithi Nokuxhashazwa Kweseva
Ukuchithwa kwewebhusayithi ukuhlaselwa kwewebhusayithi okushintsha ukubukeka kwesayithi. Ngokuvamile kungumsebenzi wama-defacers, angena kwi-web server futhi afake iwebhusayithi ebanjelwe ngenye yazo futhi enza enye yezinkinga ezinkulu uma kukhulunywa ngokuphepha online. Ezimweni eziningi, abaduni basebenzisa amathuba okuba sengozini kweseva futhi bathole ukufinyelela kwezokuphatha besebenzisa i- Umjovo we-SQL (inqubo yokujova ikhodi). Enye indlela ejwayelekile ifika ekusetshenzisweni kabi izivumelwano zokudlulisa amafayela (ezisetshenziselwa ukudlulisa amafayela phakathi kwesiphakeli neklayenti kunethiwekhi yamakhompiyutha) ukuthola imininingwane ebucayi (imininingwane yokungena ngemvume) esetshenziselwa ukufaka iwebhusayithi ekhona nenye.
Izibalo zithi kube khona okungenani ama-50.000 aphumelele ukuchazwa kwewebhusayithi ngo-2017, futhi ezimweni eziningi - sikhuluma ngokuchazwa ngobuningi kwamawebhusayithi amahle. Lokhu kuhlaselwa kubaduni kunomgomo owodwa oyinhloko: kusethwe ukudicilela phansi inkampani yakho nokulimaza isithunzi sakho. Kwesinye isikhathi, ushintsho olwenziwe lucashile (isb.abaduni bashintsha amanani entengo ezitolo zakho eziku-inthanethi), kwezinye izikhathi - balayisha okuqukethwe okungafanele futhi benze izinguquko ezinqala okunzima ukuziphuthelwa.
Asikho isijeziso esiqondile se-SEO sokuchithwa kwewebhusayithi, kepha indlela iwebhusayithi yakho evela ngayo ku-SERP iyashintsha. Umonakalo wokugcina uncike kuzinguquko ezenziwe, kepha kungenzeka ukuthi iwebhusayithi yakho ngeke ihambisane nemibuzo ebikade iyenza, ezokwenza amazinga akho ehle kakhulu.
Izinhlobo ezimbi kakhulu zokuhlasela ngokugenca ziqondise amaseva ngokuphelele, okungaholela emiphumeleni esabekayo. Ngokuthola ukufinyelela kwiseva eyinhloko (okuyi- “mastermind computer”), bangayixhaphaza kalula futhi balawule amawebhusayithi amaningi aphethwe lapho.
Nazi ezinye izindlela zokuvimbela ukuwa njengesisulu lapha:
Khetha i-firewall ye-web application ethembekile (WAF) - isebenzisa isethi yemithetho ehlanganisa ukuhlaselwa okuvamile njengokuphambuka kwesayithi nokujova kwe-SQL, ngaleyo ndlela ivikela amaseva
Gcina isoftware yakho ye-CMS isesikhathini - i-CMS imele uhlelo lokulawulwa kokuqukethwe, okuwuhlelo lwekhompyutha olusekela ukwenziwa nokuguqulwa kokuqukethwe kwedijithali futhi isekela abasebenzisi abaningi endaweni yokusebenzisana.
Landa futhi usebenzise ama-plugins nezindikimba ezinokwethenjelwa kuphela (isb. Thembela isiqondisi se-WordPress, gwema ukulanda izingqikithi zamahhala, ukubalwa kokulanda nezibuyekezo njll.)
Khetha ukubamba okuphephile futhi ukhumbule ukuphepha kwendawo ye-IP
Uma usebenzisa iseva yakho, nciphisa ubungozi ngokukhawulela ukufinyelela kweseva
Ngeshwa, akukho ukuvikelwa okungu-100% ku-intanethi, kepha ngezinga eliphakeme lokuphepha - ungawanciphisa kakhulu amathuba okuhlaselwa okuphumelelayo.
● Ukusatshalaliswa Kwe-malware
Ukusatshalaliswa kwe-malware kukhona ngokwedlulele uma kukhulunywa ngokuhlaselwa kwe-cyber. Ngokusho kwalesi sikhulu umbiko weKaspersky Lab, ingqikithi yama-29.4% wamakhompyutha abasebenzisi ahlaselwe okungenani ukuhlaselwa okukodwa kwe-malware ngo-2017.
Imvamisa, abaduni basebenzisa inqubo yokuphamba noma ukuphinga ukuziveza njengomthombo othembekile. Uma isisulu siwela kuso futhi silande isoftware enonya, noma sichofoza kusixhumanisi esikhipha igciwane, ikhompyutha yaso itheleleka. Ezimweni ezimbi kakhulu, iwebhusayithi ingavalwa ngokuphelele: isigebengu singasebenzisa ukulawula okukude ukufaka ikhompyutha yesisulu.
Ngenhlanhla yokuphepha kwewebhu jikelele, iGoogle ayichithi sikhathi futhi imvamisa iphendula ngokushesha ukufaka ohlwini lwamawebhusayithi ayingozi noma onecala lokusabalalisa i-malware.
Ngeshwa kuwe njengesisulu, noma kungelona iphutha lakho - iwebhusayithi yakho ibhalwa njengogaxekile kuze kufike esinye isaziso, ukuvumela yonke impumelelo yakho ye-SEO kuze kube manje yehle.
Uma wena, unkulunkulu enqabela, waziswa i-Google ngaphakathi kwe-Search Console yakho mayelana nobugebengu bokweba imininingwane ebucayi, isoftware engadingeki, noma ukugenca, kufanele uthathe isinyathelo ngokushesha.
Kungumsebenzi wakho, njenge-webmaster, ukwahlukanisa isiza, uhlole umonakalo, ukukhomba ubungozi. Yize kubonakala kungenabulungiswa, kukuwe ukuthi uhlanze ukungcola futhi cela ukubuyekezwa kwewebhusayithi kuGoogle.
Khumbula, iGoogle ihlala iseceleni kwabasebenzisi nokuphepha kwabo. Qiniseka ukuthi uzonikezwa ukwesekwa okugcwele ukulungisa izinto.
Kungakuhle ukuthi uvuselele ngokuqhubekayo uhlelo lwakho lwe-antivirus futhi usebenzise ukuskena okuvamile, usebenzise izinketho zokuqinisekiswa kwezinto eziningi ukuze uvikele ngokuphelele ama-akhawunti akho aku-inthanethi, futhi ubheke impilo yesayithi lakho ngamandla.
Amasu Asebenzisekayo Wokuvikela Iwebhusayithi
Kaningi kunalokho, sikholwa ukuthi amathuba okuthi sibe yisisulu sobugebengu obenziwa nge-inthanethi mancane kakhulu amathuba okuthi sibe yisisulu sobugebengu obenziwa nge-inthanethi. Iqiniso ukuthi, kungenzeka kunoma ngubani. Awudingi ngisho nokuqhuba ibhizinisi elicebile noma ube kuhulumeni ukuze ube yisisulu esingaba khona. Ngaphezu kwezizathu zezezimali noma izinkolelo zomuntu siqu, abaduni bavame ukuhlasela amasayithi ngenxa nje yobumnandi, noma ukwenza amakhono abo.
Ungenzi amaphutha we-rookie maqondana nokuphepha kwewebhusayithi yakho. Ngaphandle kwalokho - ukuthi imizamo yakho ye-SEO iyakhokha noma cha kuzoba yizinkinga zakho ezimbalwa. Ngokungeziwe kulokho esishilo esigabeni esedlule maqondana nemikhuba enconywayo yokugwema ukuchaswa kwamawebhusayithi, ukonakala, ubugebengu bokweba imininingwane ebucayi, kanye nokutheleleka nge-malware, cabanga ngala macebiso alandelayo:
Ngokusobala, ukudala iphasiwedi eqinile okungenzeka ukuthi ibe sengozini (landela Amathiphu we-Google wamaphasiwedi aphephile)
Lungisa noma yiziphi izimbobo zokuphepha (isb. Ukuqashwa okungafanele kokufinyelela kokuphatha, ukuvuza kwedatha okungenzeka, njll.)
Qiniseka ukuthi ubhalisa igama lakho lesizinda nombhalisi onokwethenjelwa futhi uthenge ukusingathwa kwewebhu okuphephile
Phinda ucabange ukuthi ngubani okwazi ukufinyelela kwizivumelwano zakho zokudlulisa ifayela kanye ne-database
Qiniseka ukuthi wenza isipele iwebhusayithi yakho bese uza nohlelo lokutakula uma kwenzeka ugencwa
Lesi yisiphetho nje seqhwa. Iqiniso ukuthi, awusoze waqaphela kakhulu - yithathe kumuntu obandakanyeka ngqo embonini yewebhu.
Akungabazeki, ukwenza ubukhona bakho ku-inthanethi kuphoqelekile njengoba abathengi bathembela kuGoogle ukuthola imininingwane esheshayo mayelana nebhizinisi lakho kanye nemikhiqizo / izinsiza ozinikezayo, kodwa futhi bayisebenzisela ukuhlunga izinketho zabo nokukhetha okuhle kakhulu kubo. Uma ugcina engqondweni amathiphu okuphepha ashiwo ngenhla bese ushintshela ku-HTTPS, ngenkathi futhi utshala imali ku-SEO yesigqoko esimhlophe, ungalindela ukukhuphuka kancane i-SERP.
Ukuphepha kwewebhu kufanele nakanjani kube yinto eza kuqala kuwe, hhayi nje ngenxa yokuvuna izinzuzo ze-SEO.
Kubaluleke kakhulu ekuhlangenwe nakho okuphephile kokushweza kumsebenzisi ngamunye, kanye nokuthengiselana okuthembekile kwe-inthanethi. Kunciphisa amathuba okukhula nokusatshalaliswa kwe-malware kanye nama-virus futhi kugxivize eminye imizamo yobugebengu enobungozi efaka ukwebiwa kobunikazi noma imisebenzi yokugenca. Ayikho imboni evikelekile, ngakho-ke kungakhathalekile ukuthi ibhizinisi lakho ligxile kuphi, kufanele uzame ngakho konke okusemandleni ukugcina ukuphepha kwewebhusayithi kuphakeme futhi wakhe ukwethembana namakhasimende akho namakhasimende akho. Eqinisweni, njenge-webmaster - unesibopho sokwenza kanjalo.
Tags: kubugebengu obuku-intanethiukudobaukubuyekeza kwe-googlehttphttpsmthokozisilets encryptamaphasiwediukusebenzisa ngokugcwele injiniuvikele amaphasiwedinokuvikelekaseoi-spoofingumjovo we-sqlukubuyekezwa kwewebhusayithi
Uyini Umehluko Phakathi Kwe-AI Nokufunda Komshini?